नेपालमा कोभिड-१९ सँगै डेङ्गुको संक्रमण बढ्ने सम्भावना - Sawal Nepal
नेपालमा कोभिड-१९ सँगै डेङ्गुको संक्रमण बढ्ने सम्भावना
सवाल नेपाल २० जेष्ठ २०७७, मंगलवार २१:०३
काठमाडौं, २० जेठ । नेपालमा (कोभिड–१९) को सङ्क्रमणसँगै डेङ्गु रोगको प्रकोप पनि बढ्ने सम्भावना रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । डेङ्गु रोग एडिस एजिप्टाई जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने गर्दछ । यो लामखुट्टे अलि ठूलो आकारको छिर्केमिर्के रङ्गको हुने गर्दछ ।
इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले कोभिड–१९ को महामारीसँगै बर्खायाम शुरु भएकाले डेङ्गुको महामारीसमेत देखिन थालेको बताए । उनका अनुसार विभिन्न ठाउँमा पानी जम्ने र ती ठाउँमा लामखुट्टे बढ्ने भएकाले डेङ्गु रोग देखिन थालेको हो । डेङ्गु रोग वैशाखदेखि मंरिसम्म देखिने गर्दछ ।
यो शहर तथा शहरोन्मुख ठाउँमा बढी पाइने गर्दछ । डेङ्गे ज्वरो छोटो समयमा हुने भाइरल रोग हो । यसका लक्षणमा एक्कासि तीनदेखि पाँच दिनसम्म ज्वरो आउने, बेस्सरी टाउको दुख्ने, मासपेशी तथा जोर्नी दुख्ने, आँखाको गेडी दुख्ने, पेट तथा आन्द्रामा गडबढी र दादहरु आउने हुने गर्दछ ।
केही बिरामीमा शुरुमा शरीरमा विमिरा र दादहरु पनि देखिने गर्दछ । ज्वरो आएको अवस्थामा नाक तथा गिजाबाट रक्तस्राव हुने गर्दछ । यो रोगको राम्रोसँग उपचार भयो भने निको हुने महाशाखाका निर्देशक डा. पाण्डेले बताए ।
नेपालमा पहिलो पटक २००४ मा डेङ्गु देखिएको थिया । हरेक वर्ष डेङ्गु रोग प्रकोपका रुपमा देखिँदै आएको छ । दुई–तीन वर्षको अन्तरालमा यो रोगले महामारीको रुप लिएको उनले बताए । यारन्टिन वा घरमा बस्दा कामको सिलसिलामा बाहिर जाँदा डेङ्गुसहित मलेरिया, पखाला र सर्पदंश रोग बढ्ने उनले बताए । डेङ्गु रोगका बिरामीको चिकित्सकको सल्लाह बिना कुनै औषधि प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन ।
यो रोग लामखुट्टेबाट रोग सर्ने भएकाले राति वा दिउँसो सुत्दा झुलको प्रयोग गर्नु पर्दछ । यो रोग सार्ने लामखुट्टे मानिसको वरिपरी प्राकृतिक वा कृत्रिम पानी जमेको ठाउँमा बस्ने भएकाले त्यसलाई सफा राख्नु पर्दछ ।
खाल्डाखुल्डी, जमेको पोखरी, कुवा, लोटा, खुल्ला बोतल जस्ता ठाउँमा लामखुट्टे हुने गर्दछ । डेङ्गु ज्वरो लागेको अवस्थामा तुरुन्तै नजीकैको स्वास्थ्य संस्थामा जानु पर्दछ । यो रोग चिकित्सको प्रत्यक्ष निगरानीमा उपचार गरे सञ्चो हुने उनले बताए ।